साथीहरूसँग घडी 29
के अन्धकार प्रकाशको अभाव हो, वा यो आफैंमा केही फरक छ र जुन प्रकाशको ठाउँ लिन्छ। यदि तिनीहरू फरक र फरक छन् भने, अन्धकार के हो र प्रकाश के हो?
अन्धकार "प्रकाशको अभाव" होईन। प्रकाश अन्धकार होइन। अन्धकार आफैमा एक चीज हो, प्रकाश होइन। अन्धकारले केही समयको लागि प्रकाश र अस्पष्ट प्रकाशको स्थान लिन सक्दछ, तर प्रकाशले अन्धकारलाई हटाउनेछ। अन्ततः उज्यालोले अँध्यारोलाई परास्त गर्नेछ र अन्धकारलाई उज्यालो बनाउँदछ। प्रकाश र अन्धकार जुन हामीले इन्द्रियहरूमार्फत महसुस गर्छौं, तिनीहरूमा अन्धकार हुँदैन, यद्यपि हामीले ज्योति र अन्धकारलाई बुझ्यौं जुन यसको वास्तविक सत्यमा र अन्धकारमा हुन्छ। कुराको रूपमा, अन्धकार एक समान पदार्थ हो, जुन मूलको रूपमा सबै अभिव्यक्तिको जड़, आधार वा पृष्ठभूमि हो। यसको मूल राज्यमा, यो शान्त छ र यो आफैंभर उस्तै हो। यो बेहोश, अन्वेकबोध र अव्यवस्थित छ। प्रकाश त्यस्तो शक्ति हो जुन बौद्धिक क्षमताहरूबाट आउँदछ जुन विकासहरूमा पारित भएको थियो र माथिको अभिव्यक्ति भन्दा पछाडि छ। जब बौद्धिकताले तिनीहरूको प्रकाश शक्ति बिना शर्त र एकसमान पदार्थमा निर्देशित गर्दछ जुन अन्धकार हो, पदार्थ वा अन्धकारको त्यो अंश, र जसमा प्रकाश निर्देशित हुन्छ, क्रियाकलापमा स्प्रि। हुन्छ। गतिविधिको सुरुसँगै, पदार्थ जुन एक थियो त्यो दोहोरो हुन्छ। कार्यमा अन्धकार वा पदार्थ अब पदार्थ हुँदैन, तर दोहरो हो। पदार्थ वा अन्धकारको यो द्वैतलाई आत्मा-पदार्थको रूपमा चिनिन्छ। आत्मा र पदार्थ एक चीजको दुई विपरीत हुन्, जुन उत्पत्तिमा पदार्थ हो, तर काममा आत्मा-पदार्थ। इकाईहरू जसमा पदार्थलाई आत्मा-पदार्थको रूपमा विभाजित गरिएको छ, साथसाथै सम्पूर्ण रूपले प्रकट हुने आत्मा-पदार्थले उनीहरूलाई प्रभावित पार्दछ र यसले उनीहरूको मूल अभिभावकको उत्पत्ति र उनीहरूको कार्य वा प्रकटको कारण पनि। पदार्थ भनेको सम्पूर्ण द्रव्यमानको साथ साथै पूरै द्रव्यमानको हरेक अविभाज्य एकाई कणको मूल र अभिभावक हो। प्रकाश प्रत्येक इकाईमा अभिव्यक्तिको र कार्यको साथसाथै समग्र रूपमा प्रकट द्रव्यमानको कारण हो। त्यसोभए प्रत्येक अविभाज्य एकाईमा, साथै सम्पूर्ण रूपमा समग्र रूप मा प्रतिनिधित्व गर्दछ: मूल अभिभावक पदार्थको रूपमा र प्रकाशको रूपमा अभिनय शक्ति। प्रत्येक इकाईमा आत्मा-पदार्थ भनिन्छ सम्भावित रूपमा अभिभावक, पदार्थ, र शक्ति, प्रकाश हुन्छ। पदार्थलाई अविभाज्य एकाईको त्यो अंशले प्रतिनिधित्व गर्दछ जसलाई पदार्थ भनिन्छ र प्रकाशलाई अर्को पक्ष वा आत्माले अर्कै अविभाज्य एकाईको भागले प्रतिनिधित्व गर्दछ। सबै ब्रह्माण्ड वा अभिव्यक्तिको अथाह पदार्थ वा अन्धकार बाहिर बुद्धिको प्रकाश शक्ति द्वारा प्रकट मा भनिएको छ, र यो प्रकाश आत्मा को यसैले प्रकट को अवधि भर कार्य मा निरन्तर कार्य मा भनिन्छ। अभिव्यक्ति को अवधिमा प्रकाश जो अन्धकार संग प्रकट मा उपस्थित छ कि हामी प्रकाश भन्छन् को कारण हो। कुरा जुन प्रकट हुँदैछ जुन हामीले अन्धकार भन्छौं। प्रकाश र अन्धकार सँधै द्वन्द्वमा देखिन्छ र प्रकटमा एक अर्कालाई ठाउँ दिईन्छ। दिन र रात, ब्यूँझने र निद्रा, जीवन र मृत्यु, एकै कुराको बिरूद्ध वा उल्टो पक्ष हो। यी विपरीतहरूले छोटो वा लामो अवधिमा वैकल्पिक रूपमा कार्य गर्दछन्, अन्धकारलाई प्रकाशमा परिवर्तन नगरे सम्म। प्रत्येक एक अर्को लाई अवांछनीय लाग्दछ यद्यपि प्रत्येक अन्य आवश्यक छ। मानिसमा ऊमा अन्धकार र प्रकाश शक्ति छ। मानिसका लागि इन्द्रिय उसका अन्धकार हुन् र दिमाग उसको ज्योति हो। तर यो सामान्यतया विचार गरीएको छैन। इन्द्रियको लागि दिमाग अँध्यारो जस्तो देखिन्छ। दिमागका लागि इन्द्रियहरू अन्धकार हुन्। जुन इन्द्रियलाई सूर्यबाट आएको देखिन्छ, हामी सूर्यको प्रकाश भन्छौं। दिमागका लागि इन्द्रियहरू र जसलाई तिनीहरू लाइट भन्छन् अन्धकार जत्तिकै छ जब यो, दिमाग, यसको मूल बुद्धिमत्ताको प्रकाश शक्तिले उज्यालो बनाउँछ। दिमागमा डुबेको र अन्धकारको बिरूद्ध संघर्ष भइरहेको बेलामा पनि सूर्यको किरण र यसको बौद्धिक धारणा हामीमा आउन सक्छ। तब हामी सूर्यको प्रकाशलाई परावर्तन वा वास्तविक प्रकाशको प्रतीकको रूपमा देख्नेछौं। अन्धकारले ठाउँ दिन्छ र स्थायी ज्योतिमा परिवर्तन हुन्छ किनकि यो धारणा र दिमागको कार्यहरूद्वारा पार हुन्छ।
रेडियम भनेको के हो र यसको लागी यसको लागी निरन्तर एक महान ऊर्जा फेंक गर्न को लागी कुनै स्पष्ट बर्बाद र यसको आफ्नै शक्ति र शरीर को हानिकारक छ, र यसको महान रेडियोकर्मिटी को स्रोत के हो?
मानिन्छ कि प्रश्नका लेखक रेडियमको भर्खरको खोज सम्बन्धी वैज्ञानिक कथनहरूसँग परिचित छन्, जस्तै यो पिचब्लेन्डबाट निकाल्ने, यसको अन्वेषण मेडम क्युरीले, यसको प्रकाश शक्तिले, अन्य शरीरहरूमा यसको कार्यको प्रभाव, यसको अभाव र कठिनाइहरु यसको उत्पादन मा उपस्थित।
रेडियम पदार्थको भौतिक अवस्था हो जसको माध्यमबाट शक्ति र भौतिक भन्दा इन्धनका लागि प्रकट हुन्छन्। रेडियम अन्य पदार्थको सम्पर्कमा शारीरिक पदार्थ हो र बलहरू प्राय: काल्पनिकको रूपमा अनुमान गरिन्छ। इथर र यी शक्तिहरू भौतिक भन्दा राम्रो पदार्थको राज्यहरू हुन् र तिनीहरू भौतिक वस्तु कहलाइन्छ वा मार्फत काम गर्दछन्, चाहे भौतिक पदार्थ हीरा हो वा हाइड्रोजनको अणु हो। यदि यो भौतिक वा भौतिक वस्तुको माध्यमबाट अभिनय गर्ने काल्पनिक वा काल्पनिक वस्तुको लागि हो भने, भौतिक पदार्थको कुनै परिवर्तन वा विघटन हुनेछैन। स्थूल पदार्थको माध्यमबाट फाइनरको कार्यले "रासायनिक" संयोजनहरू र पदार्थको सामान्य प्रयोगमा परिवर्तन गर्दछ र रसायनशास्त्रीहरूले व्यवहार गरेझैं।
रेडियम भनेको भौतिक पदार्थ हो जुन सीधै वा यसको माध्यमबाट सूक्ष्म पदार्थले तेस्रो कारक बिना र बिना सोच्ने सूक्ष्म पदार्थको कार्यद्वारा परिवर्तन गरेको हो। अन्य भौतिक पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ द्वारा अभिनय गरिएको छ, तर रेडियम भन्दा कम डिग्री मा। सामान्यतया, अन्य भौतिक पदार्थहरूमा सूक्ष्मको कार्यको नतिजा बुझ्न योग्य हुँदैन किनकि शारीरिक पदार्थ रेडियमले प्रस्ताव गरेको सूक्ष्म पदार्थको सम्पर्क र प्रतिरोधको प्रस्ताव गर्न सक्दैन, र अन्य धेरै चीजहरू जटिल रूपमा सूक्ष्म पदार्थको सम्पर्कमा सिधा हुँदैन। रेडियम रेडियमको इन्फिनिटिमल र अभेद्य कणहरू सबै कुरामा उपस्थित हुन्छन्। तर यसैले टाढाको पिचब्लेन्डे स्रोत हो जुनबाट तिनीहरू सबैभन्दा ठूलो रकममा स may्कलन गर्न सकिन्छ, थोरै भए पनि। जब रेडियम भनिने कणहरू एक द्रव्यमानमा कम्प्याक्ट हुन्छन्, सूक्ष्म पदार्थले प्रत्यक्ष रूपमा यसको मार्फत काम गर्दछ जुन इन्द्रियहरूलाई देखिने गुण र शक्तिमा देखाउँदछ।
रेडियमको रेडियो क्रियाकलाप, अहिले जस्तो गरीएको छैन, यसको सिर्जना गर्न वा आफैंबाट आफ्नै शरीरको कणहरू फ्याँक्दाको कारण हो। कुन रेडियमको भौतिक पदार्थले रेडियो-गतिविधि वा अन्य शक्ति प्रदान गर्दैन जुन यसको माध्यमबाट प्रकट हुन्छ। रेडियम एक शक्ति होइन, तर शक्तिको एक माध्यम हो। (पदार्थ दुईवटा हो र बिभिन्न विमानहरूमा अवस्थित छ। प्रत्येक विमानमा यो सक्रिय हुन्छ जब यो सक्रिय र शक्ति हो जब यो फरक पर्दछ। त्यसैले भौतिक पदार्थ निष्क्रिय वस्तु हो र बल सक्रिय वस्तु हो। खनिज पदार्थ निष्क्रिय सूक्ष्म पदार्थ हो र सूक्ष्ममा बल हो। प्लेन सक्रिय सूक्ष्म पदार्थ हो।) रेडियम शरीर हो जसको माध्यमबाट सूक्ष्म पदार्थ प्रकट हुन्छ। रेडियम भौतिक संसारको कुरा हो; रेडियो गतिविधि सूक्ष्म संसारबाट सूक्ष्म कुरा हो जुन शारीरिक रेडियमको माध्यमबाट देखिने हुन्छ। सूक्ष्म संसार वरपर र भौतिक संसारको माध्यमबाट हो, र जसरी यसको पदार्थ अझ राम्रो छ, यो भौतिक शरीरको भित्र र भित्रबाट हुँदैछ, जस्तो कि विज्ञानले भन्छ कि ईथर भित्र छ वा भित्र पस्छ, वा यो ज्ञात छ कि बिजुली भित्र काम गर्छ र पानी मार्फत। मैनबत्तीले जस्तै जो प्रकाश दिन्छ, रेडियमले प्रकाश वा उर्जा उत्सर्जित गर्दछ। तर मैनबत्ती विपरीत, यो प्रकाश दिन बाहिर जलाइएको छैन। एक जेनरेटर वा इलेक्ट्रिक तार जस्तै जो ताप वा प्रकाश वा शक्ति उत्पन्न गर्दछ जस्तो देखिन्छ, रेडियमले ऊर्जा उत्पादन र फ्याँकन्छ जस्तो देखिन्छ; र त्यसैले यो गर्दछ, शायद। तर प्रकाश वा अन्य शक्ति जुन उत्पन्न हुन्छ जस्तो देखिन्छ तारले भरिएको छैन। यो ज्ञात छ कि बिजुलीको उर्जा डायनामा वा विद्युतीय तारमा उत्पन्न हुँदैन। यो पनि ज्ञात छ कि बिजुली जुन तातो वा प्रकाश वा शक्ति को रूपमा प्रकट तार संग निर्देशित छ। एक समान तरिकामा, त्यो गुण वा बल रेडियो गतिविधि को रूप मा ज्ञात एक स्रोतबाट रेडियमको माध्यमबाट प्रकट हुन्छ जुन वर्तमानमा विज्ञानलाई अपरिचित छ। तर बिजुलीको स्रोत डाईनामो वा तार भन्दा बढी स्रोत रेडियम होइन। यसको शरीरको कणहरू फ्याँकिन्छन् र जलाइन्छन् वा इलेक्ट्रिक उर्जाको कार्यद्वारा डायनामाको वा विद्युतीय तारको कणहरू भन्दा कम डिग्रीमा प्रयोग गर्दछन्। रेडियमको माध्यमबाट प्रकट भएको स्रोतको उर्जाको अभिव्यक्तिको स्रोत जत्तिकै हो। दुबै उहि स्रोतबाट आएका हुन्। तातो, प्रकाश वा शक्ति र भौतिक रेडियमको माध्यमबाट प्रकट भएको विद्युत्को अभिव्यक्तिको बीचको भिन्नता अभिव्यक्तिको माध्यममा हो न कि बिजुली वा रेडियो गतिविधिमा। डाइनामो, जेनेरेटर वा तारले बनेको कण रेडियम बनेको कणको समान गुणको हुँदैन। सूक्ष्म पदार्थ र सूक्ष्म पदार्थमा कार्य गर्ने शक्तिहरूले कुनै अन्य कारक वा मध्यस्थता बिना प्रत्यक्ष रेडियममा कार्य गर्दछ। विद्युतीय तारको माध्यमबाट बजाउने हाल ब्याट्री, म्याग्नेट, जेनरेटर, डायनामास, स्टीम र ईन्धन जस्ता अन्य कारकहरूद्वारा प्रकट गरिएको छ। यी कुनै पनि कारकहरू रेडियमको लागि आवश्यक पर्दैन किनकि यो सिधा सम्पर्कमा हुन्छ र यसले सूक्ष्म वस्तुलाई रेडियमको माध्यमबाट वा यसैले प्रकट गर्न अनुमति दिन्छ।
यो ज्ञात छ कि विद्युतीय प्रवाह तार मार्फत जान सक्दैन, तर तारको वरिपरि। यो पनि फेला पर्नेछ कि समान तरिकामा रेडियो क्रियाकलाप रेडियममा हुँदैन, तर रेडियम वरपर वा वरिपरि हो। इलेक्ट्रीशियनहरूले प्रयास गरेका छन् र अझै केहि तरिकाहरू अपनाउन कोशिस गर्दैछन् जसबाट विद्युत् उर्जा वा भाप वा ईन्धन वा गाल्भेनिक कार्यको प्रयोग बिना नै निर्देशित गर्न सकिन्छ। रेडियमले सुझाव दिन्छ र यो कसरी गरिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ।